ရိုးရိုးမွေးခြင်းနှင့် ခွဲမွေးခြင်းတို့၏ အားသာချက်၊ အားနဲချက်မျာ…… ~ လူဗိုလ် ဟူသည် ...
ရိုးရိုးမွေးခြင်းနှင့် ခွဲမွေးခြင်းတို့၏ အားသာချက်၊ အားနဲချက်မျာ……
Author: lubo601 | 10:05 PM | No မှတ်ချက် |
Aung Myint Thaung YeuFollow
ကလေးတွေအတွက် လူ့လောကကို ၀င်လာဖို့ နည်းလမ်း၂သွယ်ရှိပါတယ်။ ကိုယ်ဝန်ဆောင် အမျိုးသမီး အနေနဲ့ကျန်းမာရေးကောင်းမွန်နေရင် ရိုးရိုးမွေးလို့ရသလို ကျန်းမာရေး အားနဲချက် ရှိနေ ရင်တော့ ခွဲမွေး ရလေ့ရှိပါတယ်။ အဓိကကတော့ မိခင်ရော ကလေးပါ ကျန်းကျန်းမာမာနဲ့ အသက်ရှင် သန်နေဖို့ပါပဲ။ ဒါပေမယ့် အခုနောက်ပိုင်း မှာတော့ ရိုးရိုးမွေးနိုင်တဲ့ အနေအထားမှာ ရှိနေပေမယ့်လည်း အလှမပျက်ချင်လို့ ခွဲမွေးကြတဲ့ အမျိုးသမီးဦးရေဟာ များသည်ထက်များလာပြီး ခွဲမွေးတာကိုက ဖက်ရှင်လိုဖြစ်နေတဲ့အတွက် ပညာရှင်များက ရိုးရိုးမွေးခြင်းနဲ့ ခွဲမွေးခြင်း တို့ရဲ့ အားသာချက်၊ အားနဲချက်တွေကို နှိူင်းယှဉ်ဖော်ပြထား ပါတယ်။
အမွှာပူးမွေးမယ်၊ ဆီးချို၊ သွေးတိုးတွေလို ကျန်းမာရေး အားနဲချက်ရှိမယ်၊ HIV ဝေဒနာသည်ဖြစ်နေမယ်၊ ဒါမှမဟုတ် အချင်းနဲ့ပါတ်သက်တဲ့ပြဿနာတွေ ရှိနေမယ်ဆိုရင် ခွဲမွေးရလေ့ရှိပြီး ကာယကံရှင်ကိုလည်း သူခွဲမွေးမှ ရမယ်ဆိုတာကို ကြိုတင်အသိပေးထားလေ့ ရှိပါတယ်။ ကလေးအရွယ် ကြီးလွန်းပြီး မိခင် တင်ပဆုံ ကျဉ်းလွန်းရင်လည်းကောင်း၊ ကလေးက မွေးလမ်းကြောင်းကို ခေါင်းမတည်ထားသလို အဲဒီ လိုခေါင်းတည်လာအောင် အပြင်ကနေလှည့်ပေးတာ ကလည်း မအောင်မြင်ရင်လည်းကောင်း ခွဲမွေးရပါ တယ်။ တစ်ခါတလေ မွေးခန်းထဲကိုရောက်ပြီးမှ ကလေးအောက်စီ ဂျင် မရတော့တဲ့ ပြဿနာမျိုးဖြစ်ပြီး အရေးပေါ်ခွဲမွေး လိုက်ရတာလည်း ရှိပါတယ်။ အခုနောက်ပိုင်း မှာတော့ လိုအပ်လို့ခွဲမွေးရတဲ့အပြင် မွေး လူနာရဲ့တောင်းဆိုချက်နဲ့ခွဲမွေးပေးရတာတွေ ပိုများလာ တာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
ကျန်းမာရေးရှုထောင့်ကနေကြည့်မယ်ဆိုရင် ခွဲမွေးတာဟာ ရိုးရိုးမွေးတာထက်ပိုပြီး ဘေးအန္တရယ် ကင်း တယ်လို့ထင်ရပေမယ့် ခွဲမွေးခြင်းကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်တဲ့ အကျိုးဆက်အန္တရယ်တွေ ရှိနေတာ အမှန်ပဲဖြစ်ပါတယ်။
ခွဲမွေးတယ်ဆိုတာ လူနာရဲ့ဝမ်းဗိုက်ကို ဖွင့်ရပါတယ်။ သားအိမ်ကို ဆက်ပြီးဖွင့်ရပါတယ်။ ကလေးကို ဆွဲထုတ်ရပါ တယ်။ ပြီးရင် သားအိမ်နဲ့ဝမ်းဗိုက်ကို ပြန်ပိတ်ရပါတယ်။ ဒါဟာ အကြီးစားခွဲစိပ်မှု တစ်ခုဖြစ် ပါတယ်။ တခြား အကြီး စား ခွဲစိပ်မှုတွေလိုပဲ လူနာကိုအသက်အန္တရယ်ဖြစ်စေနိုင်ပြီး ဒီနေရာမှာ အသက် ၂ချောင်းကိစ္စကို ပြောနေတာဖြစ်ပါ တယ်။
ရိုးရိုးမွေးရတာ ပိုပြီးမိခင်ဆန်တယ်လို့ ခံစားရပါတယ်။ ကိုယ်နဲ့အတူ ၉လလုံးလုံးအတူရှိနေတဲ့ကလေးကို ကိုယ့်ရဲ့ အားနဲ့ပဲ လူ့လောကထဲ ကိုရောက်အောင် တွန်းပို့ပေးရတာ တစ်ကယ်ပဲ ပီတိဖြစ်စရာပါ။ မိခင်နဲ့ကလေးရဲ့သံယောဇဉ်ကိုလည်း အများကြီး ပိုစေနိုင်လိမ့်မယ်လို့ ယုံကြည်ပါတယ်ဟု ရိုးရိုးမွေး ဖွားခြင်းကိုသာ ဦးစားပေး ရွေး ချယ်ခဲ့သူ ကလေး ၆ ဦး မိခင်တစ်ဦးက ပြောပြပါတယ်။
ကိုယ့်ကလေးကိုယ် ဘယ်လိုမွေးမယ်ဆိုတာ မိခင်လောင်းရဲ့ကိုယ်ပိုင်အခွင့်အရေးပဲ ဖြစ်သင့်ပါတယ်။ အသက် ၂ချောင်းနဲ့ ဆိုင်တဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကို ကျွန်မတို့ကိုယ်တိုင်ပဲ ချမှတ်ချင်ပါတယ်။ ခွဲမွေးတဲ့အခါ မိခင် တစ်ခုခုဖြစ်သွား တယ် ထားအုံးတော့၊ ကလေးကတော့ အသက်ရှင်မှာ အမှန်ပါပဲ။ ကျွန်မတို့ခွဲမွေး ဖို့ရွေးချယ်တယ် ဆိုတာ ကလေးကို အမှန်တစ်ကယ်ချစ်လို့ပါ။ အလှအပနဲ့ မဆိုင်ပါဘူးလို့ လည်း မိမိ ကျန်းမာရေးအခြေအနေကို စိတ်မချလို့သားဦး ကို ခွဲမွေးထားတဲ့ မိခင်အသစ်စက်စက် တစ်ဦးက လည်း ပြောပြပါတယ်။
နှစ်ဦးနှစ်ဖက် မိသားစုအသိုင်းအဝိုင်း ဘယ်လောက်ပဲကြီးကြီး၊ တစ်နေ့တာကုန်ဆုံးသွားပြီး ညအမှောင် ဖုံးလွှမ်းသွား တဲ့အခါ ကျွန်မရဲ့ခင်ပွန်းသည်ပဲ ကျွန်မအနားမှာ ရှိပေးနိုင်တာပါ။ သူ့အတွက် ကျွန်မ တာဝန်ကျေချင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ကျွန်မရဲ့ခန္ဓာကိုယ်အလှကို ထိန်းသိမ်းတဲ့အနေနဲ့ကိုယ်ပဲအနာခံပြီး ခွဲမွေးဖို့ရွေးချယ်တာဖြစ်ပါတယ်လို့တမင်တကာ ခွဲမွေးဖို့ရွေးချယ်ခဲ့တဲ့ အိမ်ထောင်ရှင် အမျိုးသမီးတစ်ဦး ကလည်း ပြောပြပါတယ်။
ရိုးရိုးမွေးခြင်း၏ အားသာချက်များ။ ဆေးရုံတက်ချိန် တိုတောင်းပြီး အနာကျက်ချိန် အများကြီးပိုမြန်ပါ တယ်။ နိုင်ငံ တကာမှာ ရိုးရိုးမွေးလူနာကို ဆေးရုံပေါ်မှာ ၂၄နာရီကနေ ၄၈နာရီအထိပဲ ထားပါတယ်။ ခွဲမွေးထားသလိုမျိုး သွေးထွက်လွန်ခြင်း၊ ၀မ်းဗိုက်မှာ ခွဲဒဏ်ရာကြောင့်ဖြစ်တဲ့ အမာ ရွတ်ဖြစ်ပေါ်ခြင်း၊ မေးဆေး ဒဏ်ကြောင့် မေ့တတ် လာခြင်း၊ မေ့ဆေးထိုးတားတဲ့နေရာမှာ အမြဲနာနေခြင်း တို့ ကို ခံစားရမှာမဟုတ်တဲ့အပြင် ခွဲလူနာ လုပ်နိုင်မှာမဟုတ်တဲ့ ကိုယ့်ရင်သွေးလေးကိုရင်ခွင်ပိုက်ပြီး နို့ ချိုတိုက်ကျွေးတာကိုလည်း ချက်ခြင်းပြုလုပ်နိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ရိုးရိုးမွေးခြင်း၏ အားနဲချက်များ။ မိန်းမကိုယ် ပတ်ပတ်လည်က အရေပြားနဲ့တစ်ရှုးတွေ စုတ်ပြဲသွားနိုင်ပါ တယ်။ ဒါတွေကို ပြန်ချုပ်ရတဲ့အခါ တင်ပဆုံကြွက်သားမှာ ဒဏ်ဖြစ်သွားနိုင်ပြီး ဆီး၊ ၀မ်းထိန်းရ ခက်သွားနိုင် ပါတယ်။ ချောင်းဆိုးလိုက်တိုင်း၊ ရယ်လိုက်တိုင်း ဆီးထွက်ကျတဲ့အမျိုးသမီးအများဟုဟာ ရိုးရိုးမွေးပြီး မိန်းမကိုယ်ကို ပြန်ချုပ် ထားရသူများ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် မိန်းမကိုယ်နဲ့ စအိုအကြား ကာလရှည်ကြာ နာကျင်နေတတ်တဲ့အတွက် မိမိ ခင်ပွန်းအပေါ် သိပ်စိတ်မရှည် ချင်တော့ပါဘူး။
ရိုးရိုးမွေးခြင်း၏ ကလေးအပေါ်သက်ရောက်သော အကျိုးအပြစ်များ။ မိခင်က ချက်ခြင်းဆိုသလို ထွေးပွေ့ယုယ နို့ချိုတိုက်ကျွေးနိုင်ပါတယ်။ ညှစ်ပြီးမွေးတဲ့အခါ ကလေးရဲ့အဆုပ်ထဲရောက်နေတဲ့ ရေတွကိုလည်း ညှစ်ထုတ်ပေး လိုက်ပါတယ်။ ဒီတော့ မွေးပြီးတာနဲ့ကလေးက မွန်းမနေဘဲ အောက်စီဂျင်ချက်ခြင်း ရှူနိုင်မှာဖြစ်လို့ဦးနှောက်ကို ထိခိုက်မှု နဲစေနိုင်ပါတယ်။ မိခင်ရဲ့ မွေးလမ်းကြောင်းတစ်လျှောက်ကနေ ခန္ဓာကိုယ် အတွက်လိုအပ်တဲ့ ဘက်တီးရီး ယား တွေ ကူးစက်လာတာမို့ပြင်ပကမ္ဘာကို ခံနိုင်ရည်ရှိတဲ့ ခုခံအား တစ်ခါတည်း ပါလာလေ့ရှိပါတယ်။ ဒါပေမယ့် မွေးဖွားချိန် ကြာမြင့်နေမယ်ဆိုရင် ကလေးကို ညှပ်နဲ့ ဆွဲထုတ်ရတာ ရှိတတ်ပြီး ဦးခေါင်းခွံပုံပျက်တာ၊ အခန့် မသင့်ရင် ကိုယ်လက် အင်္ဂါထိခိုက်တာ တို့ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
ခွဲမွေးခြင်း၏အားသာချက်များ။ ရိုးရိုးမွေးနိုင်ရဲ့သားနဲ့ ခွဲမွေးမယ်ဆိုရင် အားသာချက် အထွေအထူး မရှိပါဘူး။
ခွဲမွေးခြင်း၏အားနဲချက်များ။ ဆေးရုံမှာ ရက်ပေါင်းများစွာ ကုသခံရပါတယ်။ အနဲဆုံး ၄ရက်ပါပဲ။ နာကျင် မှု၊ ယောင် ရမ်းမှုတွေကို လနဲ့ချီ ခံရနိုင်ပါတယ်။ သွေးထွက်များတဲ့အတွက် သွေးသွင်းရတာဖြစ်လို့မလို လားအပ်တဲ့ ကူးစက်မှု တွေ ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ အစာအိမ်၊ ဆီးအိမ်တွေကို ထိမိရှမိတတ်တဲ့အတွက် အသက် အန္တရယ်မဖြစ်တောင် တစ်သက် လုံး တမြေ့မြေ့နဲ့ လောင်နေမယ့် အတွင်းမီးကို ငြိမ်းနေရနိုင်ပါတယ်။ ကလေးကိုလည်း နို့ ချက်ခြင်းတိုက်နိုင်မှာ မဟုတ်ပါဘူး။ ၀မ်းဗိုက်မှာ ခွဲဒဏ်ရာ အမာရွတ်ကြီး ဖြစ်ကျန်နေ ပါလိမ့်မယ်။ ဒဏ်ရာလုံးဝပျောက်ကင်းဖို့ ၂လအနဲဆုံး ကြာမြင့်မှာဖြစ်ပြီး ခင်ပွန်းသည်အပေါ် တော်တော်နဲ့ တာဝန်ကျေနိုင်အုံးမှာ မဟုတ်ပါဘူး။ ရိုးရိုးမွေးတာထက် ခွဲမွေး တဲ့အခါမှာ မိခင်သေဆုံးနိုင်ချေ ၃ဆပိုများ ပါတယ်။
တစ်ခါခွဲမွေးပြီးရင် နောက်အခေါက်တွေလည်း ခွဲမွေးရတာ့မှာပါ။ ဒါ့အပြင် ဒုတိယကလေးကို ကိုယ် ၀န်ဆောင် ထားတဲ့အခါ သားအိမ်ချုပ်ရိုးပြေ သွားနိုင်ပါသေးတယ်။ မိခင်ရောကလေးပါ အသက် အန္တရယ်ရှိပါတယ်။
ခွဲမွေးခြင်း၏ ကလေးအပေါ် သက်ရောက်သော အကျိုးအပြစ်များ။ မွေးပြီးပြီးခြင်း အဆုပ်ထဲ မှာရေရှိနေ တဲ့အတွက် အသက်မရှူနိုင်ပါ။ အများစုမှာ အဆုပ်အအေးပတ်ရောဂါ ရသွားပါတယ်။ ခွဲမွေးထားတဲ့ ကလေးတွေဟာ အ၀လွန် တတ်ကြပါတယ်။ အကြောင်းရင်းကို မသိရသေးပါဘူး။ အကျိုးကတော့ တစ်ခုပဲ ရှိပါတယ်။ ခွဲမွေးတဲ့အခါမှာလို အခန့်မသင့်လို့ဆိုပြီး ညှပ်နဲ့ဆွဲထုတ်ခံရမှာ မဟုတ်တဲ့အတွက် ဦးခေါင်းမှာ ဒဏ်ရာဒဏ်ချက်တွေ ကင်းနေပါလိမ့် မယ်ဆိုတာကို လေ့လာရေးသား တင်ပြလိုက်ရပါသည်
ကလေးကို ထူးချွန်အောင် ဘယ်လိုပျိုးထောင်မလဲ
Sleep paralysis ဘီလူးစီးခြင်း (၂)
အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် ကိုယ်ဝန်ရရှိခဲ့သည့် မိခ...
သစ်ထူးလွင် သတင်းစုစည်းမှု (၂၈-၆)
မြန်မာနိုင်ငံသမိုင်းသစ် ၏ လမ်းဆုံလမ်းခွသို့ရောက်ရှ...
စစ်သူကြီး သတိုးမဟာဗန္ဓုလ (၁၇၈၀ – ၁၈၂၅)
စကားများတဲ့ အကျင့်ကို ဘယ်လို ထိန်းချုပ်မလဲ
“ သိုင်းသမား နှင့် အတွင်းအား ”
အပြစ်တင်ခြင်းထက် အရေးကြီးသော အရာများ
သင်၏ မျက်လုံး အားပြန်ကောင်းပြီး " မျက်မှန်လွတ်တဲ့န...
သစ်ထူးလွင် သတင်းစုစည်းမှု (၂၇-၆)
အိပ်စက်ခြင်း ဆိုင်ရာ အလွဲ ယုံကြည်ချက် (၈) ချက်
(၁၅) မိနစ် တရားထိုင်နည်း
Which? and What?
အရှေ့ကိုလျှောက်ပါလို့ အီသီယိုးပီးယားကိုတဲ့ မျှော်လ...
ဟေမာနေ၀င်း ၏ CD တေး ၂၂၇ ပုဒ် စုစည်းမှု
သစ်ထူးလွင် သတင်းစုစည်းမှု (၁၉-၆)
English Speaking _ Business Expression (8)
ရာဇဝင်ထဲက ဂန္ဓာဝင်များ ( ၃ ) • မြတ်လေး •
Breech Presentation ကလေးအနေအထား တင်ပါးဆုံပြုခြင်း
သစ်ထူးလွင် သတင်းစုစည်းမှု (၁၅-၆)
"မြွေ နဲ့ အိမ်သာ"
ရာဇဝင်ထဲက ဂန္ဓာဝင်များ ( ၁ ) • ရွှေဘ •
အမျိုးသမီးတွေ ဘာကြောင့် အချစ်ကို စိတ်ကုန်သွားတာလဲ ...
ယိုးဒယားက ပြည့်တန်ဆာလုပ်ငန်းအကြောင်းတစေ့တဇောင်း ...
English Speaking - Business Expressions (3)
သစ်ထူးလွင် သတင်းစုစည်းမှု (၉-၆)
“ ပဒတ်ကလေး ပုံပြင် ”
တာဒါအိုကာရှီယိုး - လယ်သမားသားလေးကနေ ဘီလျံနာဖြစ်သွာ...
အင်္ဂလိပ် သင်ခန်းစာ ၁၀၀ ...............................
Breast writings links ရင်သား ဆေးပညာစာများ
သစ်ထူးလွင် သတင်းစုစည်းမှု (၃-၆)
English Speaking – Job Expressions (17)
လမ်းပေါ်တွင် တောင်းစားနေရာကနေ စူပါမော်ဒယ်ဖြစ်သွားသည...
" လာ ထား ပဲ "
သင့် ကလေးများ ဘာတွေကို အကြောက်ရွှံဆုံးလဲ
မိတ်ဆွေ အတုအယောင်မှန်း သိသာစေသော အချက်များ
‪#‎သခင်ကိုယ်တော်မှိုင်း‬ (ဆရာလွန်း) စာအုပ်များစုစည်...
မြန်မာ့ ဓလေ့ ထုံးတမ်းအရ ထိမ်းမြား မင်္ဂလာ (၁၀)ပါး
ရိုးရိုးမွေးခြင်းနှင့် ခွဲမွေးခြင်းတို့၏ အားသာချက်...
သစ်ထူးလွင် သတင်းစုစည်းမှု (၂-၆)